[समाचार टिप्पणी] सरकारका स्थायी प्रतिपक्ष बाबुराम
रमेश दवाडी/काठमाडौँ– सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल मिलेर बनेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय दुईधारमा छन् । पूर्व संघीय समाजवादी र पूर्व नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर बनेको समाजवादीमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षको आचरण देखिन्छ । सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्न डा.बाबुराम भट्टराई चुक्दैनन् भने उपेन्द्र यादव आलोचना गर्नबाट डराउँछन् । एउटै कारण हो, यादव सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुन् ।
संविधान संशोधनको माग राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिएका यादव यतिखेर सरकार छोड्ने कि नछोड्ने परिस्थितिमा छन् । सरकारमा रहिरहने कि छोड्ने विषयमा लामो छलफल भएपछि नयाँ शक्तिले यादवसँग पार्टी एकता गरेका थिए । बाबुरामले सरकार छोडेर संविधान संशोधनका लागि दवाब दिनुपर्ने बताएकोे बाबुराम निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ओलीले संविधान संशोधन गर्ने छाँकाँट नदेखाएपछि सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले राजपपले समर्थन फिर्ता गरिसकेको छ । सरकारलाई आलोचना गर्न राजपाले पनि छोडेको छैन । केपी ओलीले संविधान संशोधन नगरेर आफूहरूलाई धोका दिएको राजेन्द्र महतो बताउँछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त यसैपनि सरकारको आलोचना गर्ने नै भैगयो । सरकारलालार्ई आफ्नै पार्टी नेकपाको असयोग छ । नेताहरू झलनाथ खनाल, भिम रावल, अग्नि सापकोटा, डा.बेदुराम भुसाल, घनश्याम भुसाल लगायत दर्जनौं नेताहरूदे आलोचना गर्दे आएका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा होस् या सामाजिक सञ्जालमा सरकारमाथि उनीहरूको रोस देखिन्छ ।
बाबुराम भट्टराईले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । संसद्मै पनि बाबुरामले सरकारको टिप्पणी गर्छन् । उपेन्द्र यादवसँग पार्टी एकता गरेपछि सत्तापक्ष बनेका बाबुराम संसद्मा एक्लै बस्छन् । पार्टी एकीकरण गरेर समाजवादी संसद्को तेस्रो ठूलो शक्ति हो । तर संसद्मा शक्ति देखिदैन । एउटै पार्टीमा एउटा अध्यक्ष मन्त्रीपरिषद्को सदस्य अर्का अध्यक्ष प्रतिपक्ष ? यस्तो प्रश्न पार्टीमै पनि अध्यक्षद्वयलाई तेर्सिने गर्छ ।
उपेन्द्र यादवले सरकारको आलोचना गर्देनन् । बेलाबखत संविधान संशेधनको विषयमा बोले पनि सरकारको कामको विषयमा भने उनी ढाकछोप नै गर्छन् । सरकारले ल्याएका मानवअधिकार, सुरक्षा परिषद्, मिडिया काउन्सिल, गुठी विधेयकबारे उपेन्द्र यादवले कहीँकतै बोलेनन् । बाबुरामले भने विरोध जनाउँदै आएका छन् । अहिले बाबुराम र उपेन्द्र पार्टीका कामले गर्दा नियमित संसद् बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् । एकदिन हाजिरी गरेर महिनाको तलबमा खाने आरोप उनीहरूलाई लाग्ने गरेको छ ।
बाबुरामले सरकारमाथि गरेका पछिल्लो भनाइहरू हेर्दा उनले रेशम चौधरीदेखि लोकसेवा विज्ञापन विवादसम्म सरकारको आलोचना गरेका छन् । टिकापुर काण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहँदा नेल लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले ट्वीटरमा लेख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीलाई नेल लगाउनेलाई कार्वाही गर्न निर्देशन दिएपछि सानालाई बलीको बोको बनाएर ठूलालाई उम्काउने कोसिस गरेको आरोप लगाएका छन् ।
त्यसैगरी बाबुरामले नेक्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नक्कली मुठभेडमा मारेको खबरप्रति आपत्ति जनाउँदै पुरानै सत्ताधारीहरूले हर्कत दोहो¥याउनु गम्भीर भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘जनताले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आज सत्तासीन बनेका हिजोका क्रान्तिकारीहरूले उही पुरानै सत्ताधारीहरूको हर्कत दोहो¥याउनु विडम्बनापूर्ण छ ।’
आफू अर्थमन्त्री हुँदा सुरु गरेका कतिपय जनपक्षीय सुधारका परियोजनाहरू अझै पनि त्यत्तिकै अलपत्र परेको बताउँदै बाबुरामले दुःख व्यक्त गरेका छन् । संघीय संरचना अनुसार बजेट नआएको टिप्णी गर्दे उनले बजेटमा लाखौं बेरोजगार युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नयाँ साहसिला योजना नभएको बताए ।
उनले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको पनि आलोचना गरे । गुठी विधेयकबाहेक सरकारले ल्याएको अन्य विधेकहरूमा पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी हचुवाको तालमा ल्याएको टिप्पणी गरे । उनले संसद्मा भने,‘सरकारले गुठी विधेयक, सञ्चार सम्बन्धि विधेयक लगायत जे जति पनि विधेयकहरू ल्याएको छ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने उद्देश्यले ल्याएको छ । तिनलाई खारेज गरेर उपयुक्त विधेयक ल्याओस् ।’
सांसद्हरूलाई ल्यापटप वितरण गर्ने विषयको पनि बाबुरामले विरोध गरे । जनताले तिरेको करमाथि रजाइँ गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै उनले जनपक्षीय विचार उद्घोष गरे । बाबुरामले ल्यापटप वितरणदे लोकतन्त्रको बदनाम र हत्या गर्ने दिशामा जाँदैछौँ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले लेखेका छन्, ‘सांसदलाई ल्यापटप भन्ने अर्को हास्यास्पद प्रस्ताव ल्याइएको सुन्नुपर्दा लज्जित छ । निजी उपभोगका साधन कसैलाई सार्वजनिक कोषबाट वितरण गर्नु नैतिक अपराध त हुँदै हो, सभ्य समाज र लोकतन्त्रमा कानुनी अपराध पनि हु्नुपर्ने होकी ! हामी लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने र हत्या गर्ने दिशामा जाँदैछौं ?’
त्यसैगरी लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनको पनि बाबुराकमले विरोध जनाए । उनले विज्ञापन संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको मर्म विपरित रहेको बताए ।
समाजवादीका अर्का अध्यक्ष सामाजिक सञ्जालमा त्यति सक्रिय छैनन् । उनको फेसबुक एकाउन्ट । ट्वीटर हान्डल छ । तर आफ्नो बारेमा प्रकाशित भएका समाचार बाहेक अन्य कुनै सामग्री देखिंदैन । सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् केही टिप्पणी भने गर्छन् त्यो सरकारको प्रशंसा नै हुन्छ ।
एउटै पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम र उपेन्द्र यादवले सरकारप्रति सरकारको कामकारबाहीप्रति किन फरक प्रवृत्ति देखाएका छन् ? यसबारे राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले बाबुरामको प्रतिक्षी मानसिकता भएको बताए । उनले आलोचना गर्दा चर्चामा आइन्छ भन्ने मानसिकता भएको पनि टिप्णी गरे ।
पोखरेलले भने,‘जनमानसको मानसिकता नकारात्मकता हावी छ । प्रतिपक्षी मानसिकता देखिन्छ । सरकार कतिपय काम आलोचना योग्य हुन्छन् । उसका कामहरू सबै दूधले नुहाएका हुँदैनन् । त्यसले गर्दा बाबुरामजीले आलोचना गर्ने ठाउँ पायो कि गर्नुहुन्छ । प्रखर रूपमा आलोचना गर्दा चर्चामा आइन्छ भन्ने मानसिकता उहाँसँग छ ।’
बाबुरामले सरकारमा भएको पार्टीसँग हिजो अलग हुनु परेको र आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न पनि सरकारको आलोचना गर्ने गरेको बताए । ‘वैचारिक हिसावले पनि जुन सरकार सरकारमा छ, त्योसँग हजो उनी अलग भएका कारण र नयाँ पार्टी खोलेको औचित्य स्थापित गर्नुपरेको छ’, पोखरेलले भने ।समाजवादी पार्टी सहज ढंगले अगाडी नबढेने आंशका रहेको पनि विश्लेषक पोखरेलले टिप्पणी गरे । बाबुरामका एजेण्डालाई परास्त गर्ने भएकाले उनले प्रतिपक्षी मानसिकता राखेको पोखरेलको भनाई छ ।
उनले भने, ‘बाबुरामको एजेण्डालाई परास्त गरिदिने भयो । त्यसले गर्दा बाबुरामले प्रतिपक्षी मानसिकता राखिदिए । यसले के देखाउँछ भने पार्टीको एकीकरण पनि सहज ढंगले अगाडि बढ्छ बढ्दैन भन्ने आंशका पैदा भएको छ ।’
समाजवादीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको नीति बोले त्यो संसदीय राजनीति विपरित हुने विश्लेषक पोखरेलले बताए । पोखरेलले भने, ‘सरकारको नीतिका विरुद्ध बोल्न थालेपछि संसदीय राजनीतिमा नैतिक मानिदैन । कुनै मन्त्रीको सरकारको नीतिसँग असहमति भए त्यसको विरोध गर्नुभन्दा पहिलो सरकार छाड्नुपर्छ । यो संसदस्य राजनीतिको अभ्यास हो ।’
समाजवादी पार्टी प्राविधिक रूपमा सरकारमै भएको बताउँदै पाखेरेलले बाबुरामले उपेन्द्र यादवलाई सरकार छोड्न दवाब दिएको बताए । पोखरेलका अनुसार यादव सरकारबाट बाहिरीन सही समय पर्खेर बसेका छन् ।
प्रकाशित १८ असाढ २0७६ , बुधबार | 2019-07-03 09:35:16